कोरोनाले चिनायो हाम्रै उत्कृष्ट परम्परा ! | Canadian Reporters
मानिसले आफ्नो जीवनमा धेरै तरिका बाट नयाँ कुराहरू सिक्ने गर्दछ। जस्तै देखेर, पढेर, भोगेर, अर्काको अनुभव सुनेर, महसुस गरेर। जसमा कतै सैद्धान्तिक पक्ष रहन्छन, कतै व्यवहारिक। जब सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष मिल्दछ तब सिकाई को प्रभाव र प्रभावकारिता दिगो रहन्छ। हाम्रो हालको कागजी शिक्षा ले न नयाँ कुरा समेटी रहेको छ। न त प्राविधिक नाममा भएका कागजी शिक्षा समेत ले हाम्रो व्यवहारिकता सँग कुनै साइनो नै राख्ने ल्याकत राख्छ।
जब हामी ताते ताते भन्दै आमाको काखमा खेलिरहेको हुन्छौ, हाम्री आमाले फुल दिएर नानी इश्वोरलाई चढाऊ भन्दै हामी मार्फत दैविक शक्तिको पूजा गराई रहेकी हुन्छिन्। संसार नबुझ्दै इश्वोर प्रति हाम्रो प्राकृतिक लगाव बढिरहेको हुन्छ। जब चार वा पाँच वर्षको हुन्छौ, हाम्रो औपचारिक शिक्षा नाम दिइएको पढाई सुरु हुन्छ। औपचारिक शिक्षा नाम दिएको शिक्षा के रहेछ भन्ने सम्म हामी बुझी नरहेको बेला देखि नै हामीलाई उच्च ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान भन्दै विज्ञान लाई देखाइन्छ। विज्ञानमा ज्ञान, विज्ञान, वैदिक ज्ञान र प्रविधि भन्दा इश्वोर भनेको नक्कली कुरा हो। उमेरले पाका बनेका माता-पिता कि त अज्ञानताका बिच, कि त परम्परागत रुढी बादी विचार धाराको सिकार भएर हुँदै नभएको इश्वोर छ भन्दै पूजा गर्ने समयको बरबाद गर्ने गर्छन भन्ने सिकाइन्छ।
घरमा पूजा-आजा गर्ने नाममा गुरु बा आउदछन। लामो समय कसैले नबुझ्ने भाषामा मन्त्र र पाठ भट्याउछन। गुरु बा ले भट्ट्याएको कुरा हरुले केही त भनेको होला ? के भनियो ? किन पूजा गर्न जागियामा बसियो ? कुनै कसम पो खाइयो कि? भगवान् वा राक्षस सँग पो केही मागियो वा घुर्की पो लगाइयो कि? केही सङ्कल्प पो लिइयो कि ? कोही कसैलाई तारिफ पो गरियो कि ? कुनै पत्तो पाइँदैन।
गुरु बा भगवान् लाई यहाँ पैसा हाल, त्यहाँ पैसा हाल, यता जल हाल, उता जल हाल आदि मात्र पूजा गर्न बसेको कर्ताले बुझ्ने गरी बताउँछन्। पूजामा उठेको नगद, जिन्सी सबै गुरु बा कै हुन्छ। हुन पनि जब घरमा मान्छे जन्मोस, मरोस, खुसीको माहौल होस, दुखको माहौल होस, वा अन्य कुनै धार्मिक कार्य नै किन नहोस् प्राय: सबैमा तिनै गुरु बा लाई आम्दानी हुने गर्छ। स्थायी सामाजिक कर विभाग जस्तो। गजबको चलन बसेको छ। कतै कतै गुरु आमा पनि हुने सुनिएको चैँ छ। खासै भेटिँदैन। पाण्डित्य पुरुष एकाधिकार को पेसा बनेको छ।
आज हामी हाम्रो एउटै बच्चालाई स्कुलमा एक थोक र घरमा अर्को थोकको शिक्षा दिई रहेका छौ। एक ले अर्को शिक्षा लाई आफ्नो परस्पर विरोधी रहेको किटान गर्दै बाल सृजनशीलताको हत्या गर्दै आई रहेका छौ। हाम्रो समाजको परस्पर विरोधी भुईँफुट्टे ज्ञान सम्पादन प्रणाली सुविचार कत्लेआम गरी समाजमा नकारात्मक सोचका युवा पैदा गर्ने रणभूमि बनेको छ। स्कुलका हाम्रो पढाई कागती शिक्षामा सीमित छ। एउटा कुरा अर्को भन्दा छिटो कसैले कुनै लेखको बाट पढ्यो वा सुन्यो र अरूलाई बताउन सक्दा ऊ ज्ञानी र विद्वान कहलिन्छ। उसको त्यो बिद्ध्वत्व सुन्दा जति चाख लाग्दो भेटिन्छ व्यवहारमा लैजान खोजियो र उसले जे जे बताएको हो सोही कुरा बताए अनुरूप सम्पन्न गर्दा मान्छेको आकृति बनाउँछु भन्दा सुँगुर सुँगुर देखिने आकृति बन्ने अवस्था आइलाग्छ।
कोरोना सङ्क्रमणको अनुभवले के बुझियो भने जब मानिस किरिया पुत्री किरिया बसे जस्तो आफ्नो सामाजिक दुरी (उच्च मनोबल र चार हात बित्ताको भौतिक दुरी) कायम गर्न सक्दा यदि आइसोलेसनमा १३ दिन बस्दा सम्म उसलाई रोगको लक्षण देखिएन भने उ उक्त रोग बाट सङ्क्रमित भएको भए पनि नभए पनि मुक्त भएको मानिन सकिने हुन्छ। १४ दिनमा उ समाज सँग हेलमेल हुन सक्छ। परम्परागत हिन्दु धर्म–संस्कृतिमा बाबु आमाको मृत्युपछि मृत्यु भएकै दिनमा दाह संस्कार गर्ने र सन्तानले १३ दिन काज किरिया गर्ने परम्परा छ।
जुन परम्परा यदि कोरोना जस्तै सरुवा रोगबाट मानिस मरेको रहेछ भने मृतक को नजिक रहेका आफन्तमा रोग सरेको रहेछ भने उनीहरू उक्त रोग समाजका अन्य सदस्यमा पुर्‍याउने माध्यम हुन बाट रोक्न सहयोगी हुने देखियो। चलन चल्ती अनुरूप मृतकको सब आफन्तले मात्र बोक्ने चलन समेत यो अर्थमा तुलनात्मक रूपमा वैज्ञानिक नै देखियो। आफन्त गुमाउँदाको पिडामा अन्य संस्कारमा संलग्न हुनु पर्दा कम्तीमा मन अन्यत्र समेत जाने हुँदा मनोवैज्ञानिक असर कम गर्ने, शवलाई स्मशान लैजाँदा तीन पटक बिसाउने र यम सूक्त, हरि नाम वा राम नाम जप्ने कामले बिचमा थकाई मारी मारी मनोवैज्ञानिक साहस थप्दै आफन्त बाहेक अन्यले मृतक लाई छुनै नपरी दाह संस्कार गर्ने सम्भव हुने समेत बन्ने देखियो।
घाटमा पुगेपछि दाउराको चितामाथि लाश राखी मुख्य कर्ताले वैदिक मन्त्रोच्चारण साथ मुख पट्टि बाट चितामा आगो सल्काउने क्रममा चितामा श्रीखण्ड (चन्दन) जस्तो सुगन्धित काठ, आगो सल्काउने घिउ आदि राखेको समेत देखिन्छ। सामान्य तय सूर्यको प्रकाश, पृथ्वीले गर्ने शरीरको इलेक्ट्रिक रेडिकल चार्ज तटस्थता, र अक्सिजन शरीर लाइ हानिकारक ठानिएका ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूको लागि प्रतिकूल हुने गर्छ।
घिउलाई दाउराले जलाउँदा वातावरण बाट धेरै अक्सिजन खपत हुने र कार्बन डाई अक्साइड निक्लने स्वोभाबिकै हो। ढिकीमा कुटेको खैरो चामल, सुकेको गोबरको गुइँठा र घिउ बाल्दा निस्कने धुवाँ लाई अग्निहोत्र धुवाँ भन्ने गरिन्छ। जुन लामखुट्टे धपाउन काम आउँछ। अग्निहोत्र धुवाँमा इथिलीन अक्साइड, प्रोपलीन अक्साइड र फोर्माल्डिहाइड जस्ता पदार्थ हुने जसले बाताबरणमा हुने हानिकारक जीवाणुहरू मार्न सहयोग पुर्‍याउने र यज्ञ कार्यमा यदि आक्रमण युक्त बिमारी रहेछन् भने उक्त रोग अर्को बिमरि मा सजिलै नसर्ने भूमिका पैदा गरिदिने भन्ने हाल आएर पुष्टि भएको छ।
लाश आफै अर्गानिक म्याटर रहेकाले खैरो चामल, सुकेको गोबरको गुइँठा जस्ता अर्गानिक म्याटर बिना नै शुद्ध गाइको घिउ लाश सँगै जलाउँदा अग्निहोत्र धुवाँमा हुने पदार्थ लाश जलाउँदा निस्कने धुवाँमा समेत हुने गर्दछ। जसले गर्दा मलामी गएकाहरू लाई लाश जल्ने क्रममा हानिकारक हुने ठानिएका ब्याक्टेरिया र भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न जोगाउने मानिन्छ। घिउ सँगै जलेको लाशको खरानीमा समेत जीवाणुहरू मार्ने गुण उत्पन्न हुने हुँदा लाश जलाएको स्थान बाट समेत सङ्क्रमण युक्त रोग सर्ने सम्भावना घटाउने गर्छ। घिउ बल्दा आफैले नमिठो डढेको गन्ध नदिने बरु लाश जल्दै गरेको स्थान बाट आउने दुर्गन्ध घटाउन समेत सहयोगी हुन्छ।
लाश जल्ने क्रममा निस्कने धुवाँमा मानिसको नाक, मुख, आँखा र छालामा हानी पुर्‍याउने केमिकलहरू हुन्छ। जुन हावा हुँदै मलामी जानेहरूको नाक, मुख, आँखा र छालामा पुग्ने गर्छ। जसका कारण मलामीका शरीर चिलाउने र अन्य हानि पुर्‍याउने हुन सक्छ। जब लाश सँग श्रीखण्ड समेत राखी बालिन्छ, यसमा हुने अल्फा संटालोल र सय भन्दा धेरै सार तत्वोहरु समेत हावा मार्फत चारै तिर फैलन्छ । जसले दिने सुगन्धका कारण लाश जल्दा आउने दुर्गन्ध धेरै हद सम्म घट्न जान्छ।
लाश जल्ने क्रममा निस्कने धुवाँको हानिकारक तत्त्वहरू लाई श्रीखण्ड जल्दा निस्कने सुगन्धित केमिकलहरूले निष्क्रिय पारिदिने क्षमता राख्दछ। श्रीखण्ड बल्दा निस्किने केमिकलहरू एन्टी क्यान्सर गुण युक्त भएको भेटिएको छ। जलाएको श्रीखण्डको धुवाँको प्रभावकारी एन्टी भाइरल र एन्टी बेक्टेरियल गुण समेत हुने गर्छ। यसको गन्धले लामखुट्टे समेत भाग्ने गर्छ। धुवाँ आफैमा राम्रो नहुँदा नहुँदै लाश जलाउने क्रममा हामीले हालिने परम्परागत समानहरू जल्ने क्रममा उत्पादन हुने खराबीले दिने क्षति नियन्त्रणमा उत्कृष्ट रहेको वैज्ञानिक पुष्टि भएको छ।
पुरानो समयमा सबैभन्दा बढी मृत्यु प्लेग र हैजा जस्ता सरुवा रोगका कारण हुने गर्थ्यो। जुन शारीरिक सम्पर्क बाट सजिलै एक व्यक्ति बाट अर्को व्यक्तिमा फैलन सक्ने हुँदा अन्त्येष्टिमा भाग लिँदा, मलामीहरू मृतका नजिकका आफन्तहरू, मृतले प्रयोग गरेका वस्तुहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा आउन सक्ने जसबाट रोगका सूक्ष्म जीवहरू मलामी सँगै उसको घर परिवारमा समेत पुग्न सक्ने कुरा रोक्न अन्त्येष्टिमा भाग लिए पछि अनिबार्य साबुन, रिट्ठा, पाती, निम, पिना वा खरानी जस्ता एन्टी भाइरल र एन्टी ब्याक्टेरिया पदार्थले नुहाउन पर्ने नियम थियो।
घर पुगेपछि सुन पानी, गाइको गहुँत, आगो भएको खरानी, तिल, निम पत्ती आदि जस्ता एन्टी भाइरल र एन्टी ब्याक्टेरिया पदार्थले चोख्याएर प्रवेश गर्नु लाई वैज्ञानिक तरिका नमानेर कुरीति भन्न सकिने अवस्था हैन। क्रिया पुत्रीको हकमा भने कपाल आदि समेत भाइरल तथा बेक्टेरियल वा अन्य सरुवा रोग सङ्क्रमित कीटाणु हुर्कने फैलने वातावरण नहोस् भनी नुहाउने खौरने गरिन्छ। पुराना कपडा फालेर नयाँ सेतो फोहर भए देखिने कपडा लगाइन्छ। मृतकका छोरा, र परिवारले पुरै १३ दिन आशोचको नियम मान्न जरुरी गरिन्छ। १३ दिनसम्म क्रियामा बस्नेहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा दह्रो राख्न गरुड महापुराण सुनाउने चलन छ।
बाह्रौँ दिन पिण्ड दान गर्नुका साथै ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा गरी भोजन गराउने चलन छ। कसैलाई नछोई आइसोलेसन मै बसेको भएता पनि कुनै कारण चार हात बित्ताको सामाजिक दुरी भित्र पुगी सङ्क्रमित हुने सम्भावना बोकेका ब्राह्मण समेत स्वस्थ रहेको जनाकारी दिन्छ। तेह्रौँ दिन हुँदा समेत स्वस्थ देखिएको परिवार अब समाजमा हेलमेल हुन योग्य मानिने हुँदा क्रिया कार्य कार्य समाप्त गरेर मलामीहरू सँग मिल्न र भोजन खुवाउन स्वीकृति दिइन्छ। कतिपय सङ्क्रमणले एक वर्ष सम्म पुन दोस्रो, तेस्रो चरणको सङ्क्रमण दिने अनुभव रहेकाले मृत्युको एक वर्ष सम्म उक्त घर अपवित्र मानिन्छ।
आज हामी हाम्रो सामाजिक परम्परा पुरै वैज्ञानिक छ भन्न यसको हिमायती बनी मुलुकको कुना कुनामा चल्दै गरेको पाण्डित्य पाखण्डले लाजमर्दो स्थिति पैदा गरिदिएको छ। ठिक छैन भनौँ भने संसारमा ओखती नबनेको कोभिड -१९ जस्तो महामारी बाट समाज लाई कसरि मुक्त गर्ने भन्ने तरिकाको संसारले बताएको निचोड यही परम्पराको चुरो प्रविधि रहेको लगभग यकिन नै बनिसकेको अवस्था छ। यसको मतलब यही निक्लन्छ को हामीले माल पायौ तर चाल पाएनौ।